Čhēdī : khwāmpenmā læ khamsap rīak ʿo̜ng prakǭp čhēdī nai Prathēt Thai / dōi Santi Leksukhum
Čhatphim khrang rǣk. - Krung Thēp : Samnakphim Matichon , 2535 
အောင်မော်စံဆရာတော် (ကချင်ပြည်နယ်) ၏ စေတီဘုရားတည်ထားကိုးကွယ်ခြင်း အတွေ့အကြုံနှင့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများ / စကြာကောင်းစံ စီစဉ်သည်
တောင်ဥက္ကလာပ [ရန်ကုန်] : မဇ္ဈိမစာပေ , 2017. - (မဇ္ဈိမစာစဉ် ; 346)
မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးသမိုင်း နှင့် ဦးရာဇ်တော်ဘုရားကြီးသမိုင်း / ရေးသားသူ, တန်းခိုးရွာ ဆရာထွန်း
စစ်တွေ : ပြည်သူ့တိုးတက်ရေးစာအုပ်ဆိုင် , [19--]
ဖေါင်တော်ဦးဘုရားသမိုင်း နှင့် သျှာမ်းပြည်ရာဇဝင် အကျဉ်းချုပ် / ဦသောဘိတ ရှာဖွေစုဆောင်း စီစဉ်ရေးသားတော်မူသည်
3. အကြိမ်. - အင်းလေးရွာ, ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း : ထွန်း-ရောင်စုံပုံနှိပ်တိုက်း , 1963
ရန်ကုန်မြို့တော်တစ်ခွင် ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးများ သမိုင်း / တင်နိုင်တိုး
ရန်ကုန် : အောင်ပိုင်မင်းစာပေ : သဟဇာတစာပေ [distributor] , 2007. - (သဟဇာတစာပေ ; အမှတ်စဉ် 14 . သမိုင်းစာစဉ် ; 03)
မဟာဝိဇယစေတီတော်ကြီးသမိုင်း / ချစ်စံဝင်း ရေးသားပြုစု
[ရန်ကုန်] : မဟာဝိဇယစေတီတော်ကြီး , 2010
ဟံသာဝတီ(ပဲခူး) တစ်ခွင်မှ သမိုင်းဝင် လေ့လာစရာများ / မောင်ယဉ်လှိုင်(ပျဉ်းမမြိုင်)
[ရန်ကုန်?] : ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းဘဏ် စာပေကော်မတီ , 2014
Sathūp čhēdī nai Prathēt Thai / Nǭ Na. Pāknam
Phim khrang rǣk. - Krung Thēp : ʿŌdīan Satō , 2516 
Khwāmpenmā khǭng sathūp čhēdī nai Sayāmmarathēt / Nǭ. Na Pāknam
Phim khrang rǣk. - [Bangkok] : Samnakphim Mư̄ang Bōrān , 2529 
Čhēdī phœ̄m mum, čhēdī yǭ mum samai ʿAyutthayā / Santi Leksukhum ; abstract and captions by Sonthiwan Intralib
[Bangkok] : [Mahāwitthayālai Sinlapākǭn] , 2529 
พระบรมธาตุสำคัญและประเพณีขึ้นพระธาฅุล้านนา / สมัย สุทธิธรรม, เรียบเรียง
กรุงเทพฯ : นครสาส์น , c2537 
ရွှေတိဂုံဘုရားရာဇဝင် ရွှေတိဂုံဘုရားသမိုင်း / ဌေးဝေ
ရန်ကုန် : ရန်အောင်စာပေ , 2015
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ပုဂံမျိုးရိုး ဘိုဘေးတို့ဒေသ သို့မဟုတ် ရာဇဝင်ထဲက ပင်းမဲထီး / စိန်တလုံး တင်စိန်
ရန်ကုန် : ရန်အောင်စာပေ , 2016
အညာဓလေ့ နှင့် မေ့မရသောစာစုများ / ငွေရီဆန်း (ရေစကြို)
ရန်ကုန် : ရှင်မတောင်စာပေ , 2015
มหาธาตุ / ธนธร กิตติกานต์
กรุงเทพฯ : มติชน , 2557 . - (ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ)
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝတီလေးရပ်ရှိ ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးများ / [မြတ်မင်းလှိုင် ; translated by Soe Myint]
[ရန်ကုန်] : The New Light of Myammar , 2003
The folk-tales of Burma : an introduction / by Gerry Abbott and Khin Thant Han
Leiden ; Boston : Brill , 2000. - (Handbuch der Orientalistik = Handbook of Oriental studies ; 3. Abt. ; South-East Asia ; 11 Bd)
ပုဂံအနုပညာတန်ဖိုးထိန်းသိမ်းရေး / သန်းထွန်း
ရန်ကုန် : ဂန့်ဂေါ်မြိုင်စာပေ : Plastic Rainbow Book Publication [distributor] , 2011. - (ကွန်သာယာ). - (သမိုင်းအုပ်ဆောင်းစာစဉ် ; အမှတ် 12 . သန်းထွန်းရေးတဲ့ စာတမ်းန့်ဆောင်းပါးများ စုစည်းမှု)